Amụma Nzuzo | Gburugburu D.
Mpaghara D Platoon
Mpempe akwụkwọ Moulage
Anyị na-anakọta gị ozi gị mgbe ị debanyere aha na saịtị anyị, denye aha na akwụkwọ akụkọ anyị ma ọ bụ dejupụta mpempe akwụkwọ. Ihe data ọ bụla anyị rịọrọ nke na-achọghị ka a kọwaa dị ka afọ ofufo ma ọ bụ nhọrọ. Mgbe ị na-enye iwu ma ọ bụ debanye aha na saịtị anyị, dị ka o kwesịrị, enwere ike ịgwa gị ka itinye aha: aha, adreesị ozi-e ma ọ bụ akara ekwentị gị. Nwere ike, agbanyeghị, gaa na saịtị anyị na-enweghị aha.
Enwere ike iji ozi ọ bụla anyị nakọtara n'aka gị n'otu n'ime ụzọ ndị a: Iji zipu ozi ịntanetị oge ma ọ bụ mepụta akaụntụ onye ọrụ na weebụsaịtị a. Enwere ike iji adreesị ozi-e ị nyere maka ịhazi nhazi iji zitere gị ozi na mmelite metụtara iwu gị ma ọ bụ arịrịọ gị, na mgbakwunye na ịnweta ozi ụlọ ọrụ oge ụfọdụ, mmelite, nkwalite, ngwaahịa metụtara ya ma ọ bụ ozi ọrụ, wdg. Mara: Ọ bụrụ na oge ọ bụla ị ga-achọ wepu aha na ịnweta ozi ịntanetị n'ọdịnihu, anyị gụnyere ntuziaka wepu aha na ala nke email ọ bụla.
Anyị na-emejuputa usoro nchekwa dị iche iche iji chekwaa ozi nkeonwe gị mgbe ị banyere, nyefere, ma ọ bụ nweta ozi nkeonwe gị. Ndị a nche na-agụnye: paswọọdụ echebe ndekọ na ọdụ data iji kpuchido ozi gị. Anyị na-enye ojiji nke ihe nkesa echedoro. A na-ebugharị ozi nzuzo / kredit niile site na teknụzụ Secure Socket Layer (SSL) wee zoro ezo n'ime usoro ịkwụ ụgwọ anyị na-akwụ ụgwọ naanị ka ndị ikike nwere ikike ịnweta ohere dị na sistemụ ahụ nweta ha ma chọọ ka ha debe ozi ahụ na nzuzo. Mgbe azụmahịa gachara, a gaghị echekwa ozi nkeonwe gị (kaadị akwụmụgwọ, nọmba nchekwa ọha, akụnụba, wdg) na sava anyị.
Anyị anaghị eji kuki.
Anyị anaghị ere, ahia, ma ọ bụ na-ebufe ndị ọzọ na mpụga ozi nkeonwe gị nwere ike ịmata. Nke a anaghị agụnye ndị ọzọ tụkwasịrị obi na-enyere anyị aka ijikwa weebụsaịtị anyị, na-eduzi azụmahịa anyị, ma ọ bụ na-ejere gị ozi, ọ bụrụhaala na ndị ahụ kwenyere idebe ozi a. Anyị nwekwara ike ịhapụ ozi gị mgbe anyị kwenyere na ịhapụ kwesịrị ekwesị iji rube isi n'iwu, ịmanye atumatu saịtị anyị, ma ọ bụ ichebe ikike nke anyị, nke ndị ọzọ, ma ọ bụ nchekwa nke ndị ọzọ. Agbanyeghị, enwere ike ịnye ozi ndị ọbịa na-abụghị nke onwe gị na ndị ọzọ maka ahịa, mgbasa ozi, ma ọ bụ ojiji ndị ọzọ.
Usoro iwu Nchedo Nzuzo Online nke California
N'ihi na anyị ji nzuzo gị kpọrọ ihe, anyị emeela nlekọta dị mkpa iji rube isi na Iwu Nchedo Nzuzo California Online. Ya mere, anyị agaghị ekesa ozi gbasara gị na ndị ọzọ n’abụghị nkwenye gị. Dịka akụkụ nke Iwu Nchedo Nzuzo California Online, ndị ọrụ niile nke saịtị anyị nwere ike ịme mgbanwe ọ bụla na ozi ha n'oge ọ bụla site na ịbanye na ngalaba nchịkwa ha na ịga na 'Dezie Profaili' ngalaba na weebụsaịtị anyị.
Protectionmụaka Nzuzo Nchedo Nzuzo Childrenmụaka
Anyị na-akwado ihe ndị achọrọ nke COPPA (Iwu Nzuzo Nzuzo Childrenmụaka na Childrenmụaka), anyị anaghị anakọta ozi ọ bụla site na onye ọ bụla n'okpuru afọ 13. Weebụsaịtị anyị, ngwaahịa na ọrụ anyị niile ka enyere ndị dịkarịa ala 13 ma ọ bụ karịa.
Anyị emeela ihe ndị dị mkpa iji hụ na anyị na-akwado iwu CAN-SPAM nke 2003 site na izipụ ozi na-eduhie eduhie.
Biko gaa na ngalaba Okwu na Ọnọdụ anyị iji gosipụta ojiji, nkwenye, na njedebe nke ibu na-achịkwa iji weebụsaịtị anyị. http://AreaDonline.com
Site na iji anyị na saịtị, ị kwenye anyị na iwu nzuzo.
Ọ bụrụ na anyị kpebie ịgbanwe iwu nzuzo anyị, anyị ga-etinye mgbanwe ndị ahụ na ibe a, na / ma ọ bụ melite ụbọchị mgbanwe amụma nzuzo n'okpuru. Mgbanwe iwu ga-emetụta naanị ozi anakọtara mgbe ụbọchị mgbanwe ahụ gasịrị. Emegharịrị iwu a na Machị 23, 2016
Amụma Nzuzo Ndị Ahịa kwere
Anyị na-ekwe gị nkwa, onye ahịa anyị, na anyị emeela mgbalị siri ike iji weta iwu nzuzo anyị na iwu na atụmatụ nzuzo ndị a dị mkpa:
Kọmitii Azụmaahịa Federal
Iwu Nchedo Nzuzo FairCalifornia Online
Iwu Nzuzo Nzuzo nke umuaka
Rollingchịkwa mwakpo nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ahịa ahịa
Tụkwasịrị Obi Nzuzo Gị
Mpaghara D Office nke Njikwa Ọdachi
500 W. Bonita Okporo ụzọ.
Mgbe Anyị Pụrụ Inyere Aka?
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọdụ ala, consectetur adipiscing elit. Morbi et leo condimentum, mollis velit interdum, congue quam.
Nzukọ D Executive Board Nzukọ May 27, 2021
Halllọ Nzukọ Obodo na Ngalaba Ahụ Ike Ọha na Los Angeles Mee 18, 2021
Steeti Nkpuchi iwu na ebe ruo mgbe June 15
Mpaghara D Nzukọ Nzukọ Kwa Afọ maka Mee 20, 2021
Mpaghara D na-enye njikwa na ọzụzụ maka ọdachi maka obodo 23 n'ime ọwụwa anyanwụ San Gabriel / Pomona Valley nke Los Angeles County, California
Ozi gbasara iwu
Ndị ọzọ DMACS
2021 Mpaghara D Nsogbu Ọdachi
Edebere weebụsaịtị ma kwado ya site na TOC Public Relations